Sida Lacag Loogu Sameeyo Steam Sanadka 2021 | 10 Siyaabaha Sharciga ah
Bogga ugu weyn Sida Lacag Loogu Sameeyo Steam Sanadka 2022 | 10 Siyaabaha Sharciga ah
Sida Lacag Loogu Sameeyo Steam Sanadka 2022 | 10 Siyaabaha Sharciga ah
Isha sawirka: doublehike.com
Ma ogtahay inaad lacag dhaqso ah ku samayn karto Steam kaliya adoo naqshadeeya oo ciyaaraya ciyaaraha? Hadda waad samaysaa. Su'aasha xigta in la isweydiiyo ayaa ah, sidee baan lacag ugu heli karaa uumiga?
Waxay ku dhowdahay waqtigii la samayn lahaa lacag caddaan ah oo qabow inta lagu madadaalanayo!
Waa maxay Steam?
Steam waa madal qaybinta dhijitaalka ah oo loogu talagalay video ciyaaraha. Qiyaastii boqolkiiba 18 ee ciyaaraha kombiyuutarka ayaa tan lagu iibsadaa - taasoo dhalisay ilaa 150 milyan oo isticmaaleyaal diiwaangashan iyo $ 4.3 bilyan oo dakhli ah oo ka soo galay ciyaaraha la iibiyay.
Fikradda ah Steam waxay soo ifbaxday 2003 markii Valve, oo ah shirkadda abuurtay madal, ay raadineysay qaabab ay ugu dirto casriyeynta tooska ah ee tooska ah ciyaarteeda Counter-Strike iyadoo la joojinayo soo ifbaxa khiyaameeyayaasha.
Waxay kaloo rabeen inay ku soo lifaaqaan qaar ka mid ah adeegyada cajiibka ah akoonadooda ciyaarta marka laga reebo ciyaarista khadka tooska ah.
Sidaa darteed, madalku maahan oo kaliya inuu fursad u helo inuu lacag u helo ciyaartooyda ciyaarta laakiin xitaa naqshadeeyayaasha ciyaarta, soosaarayaasha, iyo kaydiyayaashu waxay sidoo kale ka kasban karaan Steam.
Waqtigan xaadirka ah, in ka badan 18% dhammaan iibsiyada ciyaarta PC, waxaa lagu sameeyaa Steam, waxayna iibisay in ka badan $ 4.3 bilyan ciyaaraha.
Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad kasbato wax dheeri ah markaad ciyaareyso ama horumarinayso, Steam waa meesha. Laakiin, sidee?
Sida Lacag Loogu Sameeyo Steam
Asal ahaan, waxaa jira laba siyaabood oo lacag loogu sameeyo Steam. Marka hore waa ka ganacsiga alaabada Steam Market tan labaadna waa in la horumariyo ciyaar oo lagu xaraasho Steam Direct.
Marka, haddii aad tahay ciyaartoy ciyaarta, soo -saare, koodh -sameeye, ama naqshadeeye, oo aad la yaabban tahay sidaad awooddo lacag online, halkan waa liis adiga kugu saabsan sida lacag loogu sameeyo Steam.
#10 Helitaanka walxaha
Waxaad lacag ku kasban kartaa Steam adoo gacanta ku qabta qaar ka mid ah alaabada qiimaha leh ee ciyaartoydu jeclaan doonaan inay gacmahooda ku qabtaan. Waxaad alaabta ku heli kartaa siyaabaha soo socda;
Adigoo ciyaaraya ciyaaro - Waxaad ciyaari kartaa ciyaaro waxaadna soo ururin kartaa alaabta la tuuray iyo kaararka ganacsiga. Tusaale ahaan, Dota 2, waxaa jira dhibco shay oo joogto ah oo ku siinaya uumi shay. Waxa kale oo laga yaabaa inaad xoogaa sugto si aad u hesho dhibcaha dhifka ah mooyaane haddii nasiibka uusan dhinacaaga ahayn.
Adigoo kormeeraya suuqa - Waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso suuqa si aad u aragto marka qiimaha shaygu hoos u dhaco. Tani waxay badanaa dhacdaa marka ay sii kordhaan dhibcaha ay sababeen ciyaartoy waaweyn.
Ganacsi - Waxaad sidoo kale ku kasban kartaa kaash ahaan. Tusaale ahaan, haddii aad garaacday jaakada oo aad ka heshay shay aan qiimo lahayn Dota 2, markaa waxaad ka helaysaa dalab qof doonaya inuu ku bixiyo toban fure. Waxay noqon doontaa xikmad haddii aad laba jeer hubisid qiimayaasha suuqa ee labada dhinac ka hor intaadan dooran inaad shaabadeyso heshiiska iyo in kale.
#9 Iibso Qiimo sare waqtiga ku habboon
Dhab ahaantii waxaad ku iibsan kartaa kaararka qiimo aad u sarreeya. Iibsadayaasha aad u jecel sheyga ama kaarka ayaa had iyo jeer leh farxad aan la sifeyn karin lacagta uu isagu/iyadu haysto oo ay diyaar u yihiin inay bixiyaan ilaa boqol doollar kaarka ganacsiga sida kaarka foil.
Markaa, waxaad u baahan tahay inaad samayso waa inaad la socotaa suuqa si aad u aragto waxa socda marka la eego kaadhadhka aadka loo baahan yahay markaa waxaad dhigtaa kaadhadhkii aad iibin lahayd.
Waa tan dhagartii; kaararka ugu horreeya waxeey ku iibiyaan wax ka badan kaararka maalinta ku xigta gaar ahaan marka ciyaar uun ay bilaabatay kaarkeeda ganacsi. Moreso, kaararka aan la heli karin waxay u muuqdaan kuwo aad u qiimo badan.
#8 Keydso kaarkaaga ganacsiga
Tani waxay u egtahay 'hoarding', sax? Laakiin, wax kasta. Fikradda ka dambaysa badbaadinta kaarkaaga ganacsi waa in la beddelo hadhow.
Tani laga yaabee inaysan dhammaan ahayn wax fudud laakiin i aamin, kaararka ganacsiga qulqulka ah ee aad ka hesho ciyaaraha waxay u qalmaan dhowr doollar.
Ma jiro qaab dhab ah oo aad ku maareyn karto si aad u hubiso inaad heli karto kaararka ciyaarta qiimaha leh.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tilmaamo ka caawiya mustaqbalka fog. Ogaanshaha tilmaamahaas wax badan bay kuu badbaadin doonaan.
Habka ugu fiican ee lagu heli karo oo loo kaydin karo kaararka waa in aan laga fikirin. Si fudud ugu raaxayso ciyaartaada adigoon maskaxdaada saarin kaararka ciyaarta. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto markaad aragto inta kaararka ciyaarta ee aad urursatay mustaqbalka fog.
Fikrad ahaan, waxaad heleysaa kaarkaaga ganacsi ee ugu horreeya wax yar uun ka dib 15 -ka daqiiqo ee ciyaarta ciyaarta iyo kan labaadna si dhaqso ah ayuu u imaan doonaa, ka dib 2 saacadood si uu sax u noqdo!
#7 Qabso alaabta horay loo sii daayay
Marar badan soo-saareyaasha ciyaarta ayaa hoos u dhiga dalabka hore. Marka, markaad hesho tilmaanta, isku day inta aad awoodo si aad uga faa'iidaysato. Hubi in waxyaabaha ku jira sii-dayn hore la iibin karo.
Mid ka mid ah tusaalaha wanaagsan ee tan ayaa ah 'Ciyaar-yaqaan aan la isku qurxin karin' oo la siiyay dhammaan ciyaartoydii horay u dalbaday PUBG. Ciyaartu waxay ku kacday $ 30 oo keliya oo setkii ayaa la yimid lacag la’aan waqtigaas.
Waqtigan xaadirka ah, setka qurxinta ayaa lagu iibiyaa $ 1,400 Steam.
#6 Isticmaal Suuqa Steam
Suuqa Steam wuxuu u oggol yahay ciyaartooyda ciyaarta inay ka ganacsadaan waxyaabaha la kasbaday markay ciyaarayaan. Alaabada sida kaararka ganacsiga iyo sidoo kale alaabta ciyaarta dhexdeeda ayaa had iyo jeer baahi weyn u qaba. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad samayso sahan oo aad xirto heshiiska iibsadaha saxda ah.
Lacagta aad kasbato markaad iibiso alaabtaada waxay toos ugu aadeysaa Boorsadaada Steam.
#5 Qaybinta ciyaaraha asalka ah ee tooska uumiga
Waxaad lacag caddaan ah oo qabow ku samayn kartaa Steam adiga oo ku qaybinaya ciyaaraha asalka ah Stream Direct. Habkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad lacag ku hesho iyadoo kuxiran dakhliga iibinta foomka ciyaarta; tan waxaa ka mid ah iibsiga ciyaarta.
Si ka duwan waxyaabaha lagu xaraashayo suuqa Steam, qaybinta ciyaaraha Steam Direct waxay u baahan tahay xoogaa maalgelin ah.
Marka hore, waa inaad gelisaa waqtigaaga iyo tamartaada si aad u horumariso ciyaarta ka hor intaadan kasban.
Marka labaad, waa inaad bixisaa qiyaastii $ 100 si ciyaartaada loogu daro Steam.
Waxa ay tani u baahan tahay waa in Steam Direct, waa inaad horumarisaa ciyaar ka dibna aad lacag ku bixisaa si loogu daro Steam Direct. Si ka duwan Suuqa Steam, Steam Direct waxay kuu dammaanad qaadeysaa soo laabasho weyn oo ku saabsan maalgashiga waxaadna ka bixi kartaa koontadaada oo kaliya maahan Wallet Steam.
Haddii aad samayso ciyaaro aad u xiiso badan oo xiiso leh, waxaa jira fursad aad u weyn oo aad lacag kaga samaysan karto internetka Steam.
#4 Naqshadeynta ciyaarta iyo koodh siinta
Haddii aad ku fiican tahay naqshadeynta ciyaarta iyo koodh -siinta, waxaa laga yaabaa inaad gacan weyn ka geysato soo -saareyaasha ciyaarta ee u baahan xirfadahaaga si aad uga caawiso inay horumariyaan cayaaraha ay ku iibiyaan Stream Direct. Sidaa darteed, haddii aad tahay a banaan soo -saare ama cod -bixiye, waxaad la xiriiri kartaa horumariyeyaasha kale ee ciyaarta si aad ugu kariso cayaaraha wanaagsan suuqa tooska ah.
Si aad uga faa'iideysato fursaddaas, waxaad u baahan tahay inaad ku xiriirto goleyaasha Steam halkaas oo aad ka heli karto ciyaartoy diyaar u ah inay ku siiyaan lacag caddaan ah si aad ugu abuurto farshaxan asal ah.
#3 Iibinta kaararka baxsashada xagaaga
Kaararka Goosashada Xagaaga waa kaar ganacsi oo qaali ah oo qaali ah oo la bixiyo inta lagu jiro iibinta xagaaga. Waxaad ku heli kartaa kuwan saddex siyaabood:
Mar kasta oo aad $ 10 ku bixiso iibinta Steam, waxaa jirta fursad aad ku badin karto koox kaarar ah.
Waxa kale oo jirta suurtogalnimada in lagu helo kaadhka noocan ah iyada oo la samaynayo calaamad (burburinta sagaal kaar).
Waxaad heleysaa hal kaar saddexdii jeerba ee aad codkaaga ku bixiso heshiiska Doorashada Bulshada. Ku rid codkaaga Steam hal mar siddeeddii saacadoodba mar si aad u awooddo inaad qaadato kaararka bilaashka ah.
#2 Ka digtoonow dhibcaha shayada ee cayaaraha aad ugu jeceshahay
Ciyaaraha qaarkood waxay hoos u dhigaan wax ka duwan kaararka is -weydaarsiga. Si aad u aragto cayaaraha hoos u dhigaya waxyaabaha muhiimka ah, booqo suuqa Steam oo guji qaybta “ku ciyaarista ciyaarta” dhinaca midig ee barnaamijka durdurka si aad u aragto xulashooyinka.
Waxaad la yaabi lahayd inta shay ee la heli karo si loogu iibsado suuqan.
Tusaalaha xiisaha leh ayaa noqon doona waxyaabaha Golf -ka kula jira saaxiibbadaada.
Ciyaar qiimaheedu yahay $ 6 oo kaliya ayaa hoos u dhigi doonta waxyaabaha bixin kara ilaa $ 8. Waa inaad nasiib u yeelataa inaad hesho waxyaalahan, haddana si joogto ah ayay hoos ugu dhacaan intaad ciyaarta ciyaareyso.
#1 Ka faa'iidayso Barnaamijyada Bixiya Lambarada Uumiga ee Bilaashka ah
Waxaa jira barnaamijyo iyo mareegaha kala duwan oo kuu oggolaan doona inaad hesho dhibco marka aad qabato hawlo gaar ah.
Markaad urursato dhibcahaas ku filan, waxaad markaa dib u soo furan kartaa sida Xeerarka Steam haddii aadan rabin inaad lacag caddaan ah ula baxdo.
Waa kan liiska barnaamijyada kaarka hadiyadda ee aad ku biiri karto si aad lacag caddaan ah Steam Cash ugu hesho:
Kaararka hadiyada ee Amazon
Sideen Ugu Iibin Karaa Alaabta Suuqa Steam?
Ku ciyaarista Steam, waxaad heleysaa kaararka ganacsiga iyo alaabada, oo aad keydin karto oo aad gadaal ka ganacsan karto Suuqa Steam.
Ciyaar kasta oo aad ciyaarto, waxaad caadiyan heleysaa saddex kaar. Kaararku qiimahoodu wuu kala duwan yahay, qaar baa lagu qiimeeyaa dhawr senti oo keliya halka kuwa kalena ay ka qiimo badan yihiin dhowr doollar.
Helitaanka kaararkaasi waa mid otomaatig ah, waxayna ku xiran tahay xaddiga waqtiga aad ku bixinayso ciyaarta. Kaarka koowaad wuxuu yimaadaa kadib 15 daqiiqo oo ciyaarta ciyaarta ah halka ka labaadna uu yimaado kadib markaad dheeshay laba saacadood.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u urursato alaab kugu filan, waxaad ku ridi kartaa Suuqa Steam si loo iibiyo. Iibintu si otomaatig ah ayey u tahay marka isticmaale doorto inuu iibsado alaabtaada.
Soo noqoshada ka timid iibinta alaabta iyo kaararka ganacsiga ayaa markaa lagu xisaabin doonaa boorsadaada Steam. Soo celinta lama soo celin karo jeebka Steam; si kastaba ha ahaatee, waxaa loo isticmaali karaa in laga iibsado ciyaaraha iyo alaabta kale Suuqa Steam.
Iyada oo leh Steam, khibraddaada ciyaarta haddii ciyaartoy ahaan, soo -saare, koodh -sameeye, ama naqshadeeye ma aha oo kaliya madadaalo, waxaa jiri doona xoogaa lacag caddaan ah oo aad ka qaadan karto ciyaar kasta haddii aad dheefto hababka lacag -helidda uumi. Waxay ku dhowdahay waqtigii abaalmarinta xiisaha!
Talooyinka Ugu Fiican Sida Loola Dagaalamo Tigidhka Xawaaraha
AAA ma mudan tahay? Xubinimada, Qiimaha, iyo Hawlaha
19 Siyaabood oo Loogu Heli Karo Xubinnimada Costco Lacag La'aan
Costco Vs Sams Club: Faa'iidooyinka Xubinnimada ee ugu Fiican | Faa'iidooyinka & Qasaarooyinka
Dib u Eegista Xubinnimada AARP 2022: 17 Faa'iidooyinka, Qiimaha & Sida ay U Shaqeyso
Miyaad wax badan ka qabanaysay Ms-Excel adigoon fikrad yar ka haysan hababka ugu fiican ee lagu heli karo…
Mushaharka Billaha ah ee YouTubers oo leh inka badan Hal Milyan Macaamiil 2022
Youtube wuxuu 15kii sano ee la soo dhaafay noqday hay'ad warbaahineed oo guud. Waxay noqotay daruur casri ah oo daruurta ku jirta…
Sida lacag looga helo SoundCloud sanadka 2022 | Qaab -buuxa
SoundCloud waxay u ogolaatay malaayiin fannaaniin ah inay ka dhigaan muusigooda mid caalami ah. Waxa ay kuwa kale kaga duwan yihiin…